Iyini Imvelo Yothando LukaNkulunkulu? | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
USiqiu Edolobheni LaseSuihua, Esifundazweni saseHeilongjiang
Noma nini uma ngibona le ndima elandelayo yamazwi kaNkulunkulu, “Uma kade selokhu wethembeke kakhulu futhi ungithanda, kodwa uhlushwa ukugula, izinkinga zokuphila, kanye nokushiywa abangane nezihlobo zakho noma ukukhuthazelela noma yiziphi ezinye izinhlekelele ekuphileni, ingabe ukwethembeka kwakho kanye nothando lwakho Ngami kusazoqhubeka?” (“Inkinga Enkulu: Ukukhaphela (2)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). ngizizwa ngingeneme neze—umuzwa othile wosizi uyangisibekela ngaphakathi bese inhliziyo yami izwakalisa isikhalo sayo esingenaphimbo: Nkulunkulu Wami othandekayo, ungavumela kanjani ukuba labo abathembekile Kuwena futhi abakuthandayo bahlangabezane namashwa anjena? Ngenxa yalokho, ngibe nenkinga kakhulu yokuqonda incazelo yomfowethu ovela ngenhla owathi, “Imfuno yokugcina eyafunwa nguNkulunkulu kumuntu ukuba abe nothando futhi nobuqotho.”
Kamuva nje, udade engangisebenzisana naye waba nesifo se-hyperthyroidism. Kwaya ngokuya, isimo sakhe safinyelela endaweni lapho kwakudingeka adle izidlo eziyisithupha ngosuku. Ngenxa yengcindezi yesifo, amandla akhe aya ngokuya ephela, wayesephila usuku nosuku nokucindezeleka, ubuthakathaka kanye nokukhathala. Umzimba wakhe wavele wangabe usakwazi ukwenza izifiso zakhe zokugcwalisa imisebenzi yakhe futhi ukugula kwakhe kwaya ngokuya kudlondlobala. Angikwazanga ukuqonda ukuthi kungani lokhu kwakwenzeka: “Lo dade wayeshiye umndeni wakhe nomsebenzi oholela kahle unanemihlomulo emihle ukuze azozinikela ekugcwaliseni imisebenzi yakhe futhi wayethembekile kakhulu. Kwenzeka kanjani ukuthi, phezu kwakho konke lokhu ayesekwenzile, athwaliswe iminjunju yalokhu kugula esikhundleni sezenzo zakhe ezinhle? …” Angizange ngizwakalise imizwa yami, kodwa inhliziyo yami yayigcwele ukuyaluza—njalo uma kukhona oqala le ndaba ngangivele ngiphelelwe yisineke.
Kungekudala nje emva kwalokho, mina nodadewethu lona sahlukana, kodwa angizange ngimkhohlwe. Ngolunye usuku, ngabuza umphathi wami ukuthi wayeqhuba kanjani lo dade. Umphathi wathi: “Ekuqaleni wayenesimo esibi kakhulu futhi enqaba ukubona umsebenzi kaNkulunkulu. Kamuva, waziphoqa ukulungisa isimo sakhe, wafuna inhloso kaNkulunkulu ngaphakathi kweminjunju yokugula. Ngokusizwa amazwi kaNkulunkulu, waqala ukuzazi nokubona ukuthi ubengenalo ukholo loqobo. Ngaphakathi okholweni lwakhe kwakusekhona lowaya muzwa “wokushintshiselana,” esenesifiso sokuzuza izibusiso ngenxa yokholo lwakhe kuNkulunkulu. Waphinde wabona ezinye izinhlobo eziningi zokuhlubuka ngaphakathi kuyena. Uthe uma esezibonile lezi zinto ngaye, impilo yakhe yaba ngcono kakhulu. Uyalulama usuku nosuku, usebuyele ezidlweni ezintathu ngosuku futhi isimo sakhe singcono kakhulu. Useyakwazi nokulekelela odade nabafowabo bekhaya elimsingethe ukuba balungise izimo zabo….” Ngithe uma ngizwa lezi zindaba ezinhle, ngethuka ngempela. Ngangicabange ukuthi ukuhlaselwa ukugula kuyomyethisa udade lo futhi kumdalele ukuhlupheka okukhulu. Edlavazwe ukugula, ngangikholwa ukuthi ubukhona bakhe endleleni eya phambili kwakuyoncipha. Ngangiye ngasola nokuthi ngeke akwazi ukuqhubeka. Namuhla, ngibheke nesimo sangokoqobo sesimo sakhe, ngasala nginkemile. Akagcinanga nje ngokungaphelelwa ukholo, kodwa, ngokucwengwa ukugula kwakhe, wayegcine esewuqonda umsebenzi kaNkulunkulu wakwazi nokubona ukonakala kwakhe. Wayefunde empilweni yakhe wakwazi nokuphucula impilo yakhe. Ingabe lokhu kugula kwakungekona ukubonakalisa kukaNkulunkulu uthando Lwakhe lweqiniso kanye nensindiso yangokoqobo yomuntu?
Nkulunkulu othandekayo, ngiyabonga ngokusebenzisa zonke izinto ezingizungezile ukuze ulungise indlela yami engasile nephambukayo yokucabanga futhi ungivumele ngibone ukuthi yize noma uthando Lwakho lungahambisani nemicabango yethu, izibonakaliso zalo kuhlezi kuhloswe ngazo ukusithuthukisa nokusisindisa. Izenzo Zakho zothando zihlala njalo zifakwe ukusebenza kwenhliziyo Yakho kanye nobuhlakani obungenakulinganiswa. Ngiphinde ngabona ukuthi ngaphambilini bengingaqondi ukuthi uthando Lwakho imvama luye lufihlwe phakathi kwezimo ezithile. Nkulunkulu othandekayo, ngenxa yothando Lwakho owabelana ngalo nesintu, ngikunika udumo nokubonga! Ngethemba futhi nokuthi ngelinye ilanga nami ngiyothola lolu hlobo lothando. Uma lolu thando lungase nami lungifikele, ngiyafunga ukuba ngamukele noma ukuhlupheka okungakanani, ukuze ngikwazi ukuzwa futhi ngifakaze ngothando Lwakho.
Okwedlule：Kunenjabulo Enkulu Ekwethembekeni
Okulandelayo：Ngizimisele Ukwamukela Ukuhlolwa Yibo Bonke
UXiaoxiao Edolobheni laseXuzhou, Esifundazweni iJiangsu Ngenxa yezidingo zomsebenzi webandla, ngasuswa ngayiswa kwenye indawo ukuphelelisa umsebenzi …
Ngingumuntu ngokwemvelo owethembekile, yingakho bengihlala ngihlushwa ngabanye abantu. Ngenxa yalokho, ngizwe ukubanda komhlaba womuntu futhi ngezwa ukuphila kwami kungenalutho futhi kungenanjongo.
UFan Xing Edolobheni LaseZhumadian, Esifundazweni SaseHenan Esikhathini esedlule, ngahlanganiswa nodade othile ukuze ngiyosebenza emisebenzini ethile.…
UZixin wasedolobheni laseWuhan, esiFundazweni saseHubei Ngokudla nokuphuza amazwi kaNkulunkulu nokulalela intshumayelo, ngafinyelela ekukuqondeni …